Kaadị ebe nchekwa mgbake online
Olee otú naghachi data si kaadị nchekwa na ebe nchekwa kaadị mgbake ngwaọrụ online
Ugbu a, e nwere ọtụtụ online kaadị ebe nchekwa mgbake ngwaọrụ na idei mmiri na ụlọ ọrụ. Dị otú ahụ na stiif mpi, ụlọ ọrụ na-agbalị si-mpi onye ọ bụla ọzọ iji a zuru ezu na-ekere òkè ahịa. Na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-azọrọ na ha na ngwaahịa ndị elu àgwà, na-nkọ mgbe emeso ndị a na ngwaahịa. Lezienụ anya maka ndị kasị mma a pụrụ ịdabere na online kaadị ebe nchekwa mgbake ngwá ọrụ na-enyere gị weghachite gị faịlụ.
Nsogbu okosobode mgbe eji kaadị ebe nchekwa
Enweghị ike nke kaadị-ghọtara site na kọmputa, igwefoto dijitalụ ma ọ bụ ekwentị.
Ọnwụ nke data dị ka a n'ihi nke kaadị ebe nchekwa na-jikọọ nje na kọmputa.
Njikwa Iṅomi nsogbu. Mgbe ụfọdụ na-akpụ akpụ omume ma ọ bụ data si ochie kaadị onye ọhụrụ nwere ike ịbụ a nsogbu ruru nwebisiinka nchebe.
Bụ n'ebe ọ bụla online kaadị ebe nchekwa mgbake ngwá ọrụ?
Ee, e nwere dị iche iche online kaadị ebe nchekwa mgbake ngwaọrụ. Kasị nkịtị online data mgbake ngwaọrụ agụnye
m. 7-Data Recovery Software
ii. Kaadị Iweghachite Pro
too ogologo. Naghachi My Files software
Ọghọm nke na-eji online ngwaọrụ naghachi gị onwe data
Ọ bụ ezie na online ngwaọrụ ime ihe dị egwu na-arụ ọrụ nke na-agbake furu efu data, ngwá ọrụ ndị na-enwe ụfọdụ drawbacks na aka nke ọzọ. Lee ụfọdụ n'ime ihe na-agaghị emeli nke na-eji online ngwaọrụ naghachi gị onwe data.
a. Nche na nzuzo nke data. Mgbe ekwu okwu nke onwe ma ọ bụ oké mkpa data na Internet, ajụjụ nke nzuzo na nche nke data na-abịa na-uche. Nzuzo na mwute ozi nwere ike leaked otú etinye a ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye n'ime ize ndụ.
b. Limited akara site onye ọrụ. The onye ọrụ nwere obere akara nke na-egbu na ọrụ nke ma ndị ngwaike na software ebe ọ bụ na ọrụ na ngwa na-awa online.
c. Vulnerability nke data. Online ngwaọrụ na-enweghị ka hackers na ojiji ọrụ. Ọ bụrụ na ndị igwe na-eji na-echekwa data enwe nche iro ma ọ bụ agha, ọ pụrụ iduga leakage nke ọmụma nke ọtụtụ ndị.
Ndị kasị mma ọzọ ka online kaadị mgbake softwares
E nwere ọtụtụ data mgbake software na idei mmiri ahịa. Ajụjụ bụ nke software bụ ihe kasị mma na a pụrụ ịdabere maka data mgbake? Wondershare Data Recovery (Maka Mac) nwere karịrị oge pụtara ịbụ ndị kasị mma na irè software maka agbake data. The software na-professionally e mere iji ekwe ka ala na ngwa ngwa ọsọ na-agbake data. Ọ nwere anọ mgbake ụdịdị; furu efu faịlụ mgbake, raw mgbake, malitegharịa mgbake na nkebi mgbake.
Wondershare Data Recovery Na-abụghị nanị na-eji na-agbake data kamakwa photos, ozi, Archives, music faịlụ na videos. Ọzọkwa, nke a dị ike software ike ga-eji na-agbake data ọnwụ ruru iche iche ihe na gụnyere formatting, virus mbuso agha, na-ekwesịghị ekwesị ojiji nke ngwaọrụ, kpachaara anya ma ọ bụ n'amaghị ama nhichapụ.
Data mgbake bụ ngwa na ị nwere ike ihuchalu gị faịlụ n'ihu na-agbake. Wondershare Bụ ihe kasị mma ngwugwu maka unu, ebe ọ bụ na ọ na-akwado dị iche iche formats na awade a free ikpe nhọrọ maka gị.
Olee otú naghachi ehichapụ ọ bụ furu efu faịlụ site na iji Wondershare Data Recovery
Naghachi gị furu efu faịlụ, download Wondershare Data Iweghachite ma n'ihi na Windows ma ọ bụ Mac nhọrọ n'ime na gị Mgbakọ ngwaọrụ. Wụnye na-amalite na-agba ya na kọmputa gị. Adịghị wụnye software na disk ma ọ bụ kaadị ebe ị kwụsịrị anyị faịlụ. Ebe a na-na-eduzi nzọụkwụ-enyere gị aka naghachi gị ehichapụ faịlụ
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode
Na-agba ọsọ usoro ihe omume ma họrọ Standard mode. Ị nwere ike na-ahọrọ iji Ọkachamara mgbake mode. Maka gị niile furu efu faịlụ ruru nhichapụ na-ekpocha na egweri biini ojiji Echefuola File Iweghachite. Nkebi Iweghachite revives niile furu efu data metụtara partitioning. Ọ bụrụ na abụọ ụdịdị ida eji Raw File mgbake ịtụte niile nchekwa na gị SD kaadị enweghị ihe ọ bụla signatures. Ọ bụrụ na ị kwụsịtụ mgbake ị ga-pịa malitegharịa mgbake.
Nzọụkwụ 2 Họrọ ụdị faịlụ
Ebe a, họrọ faịlụ na ụdị na-ịchọrọ ị na ha ga-gbakee. I nwekwara ike họrọ All faịlụ na ụdị ọ bụrụ na chọrọ niile faịlụ na-Ewepụtara. Pịa na Next bọtịnụ na ala nri n'ihu na faịlụ mgbake.
Nzọụkwụ 3 Họrọ ọnọdụ
Gosi na ọnọdụ ebe ị furu efu gị faịlụ. Ị nwere ike họrọ Dum kọmputa ma ọ bụrụ na ị maghị ebe gị faịlụ na-ehichapụ. Pịa na Next mkparịta ụka igbe ịnọgide.
Nzọụkwụ 4 iṅomi maka furu efu faịlụ
Mgbe a na nzọụkwụ ị nwere ike Kwado Deep iṅomi, Raw File Iweghachite ma ọ bụ i nwere ike dị eleghara na pịa Malite. Iji naghachi faịlụ furu efu ruru formatting họrọ Deep iṅomi. Ma ọ bụrụ na ị nzube iji weghachite faịlụ furu efu a mgbe gara aga Raw File Iweghachite ga-arụ ọrụ kasị mma.
Nzọụkwụ 5 Preview na-agbake furu efu faịlụ
Ihuchalu Doppler results na ego ma ihe nile faịlụ ị chọrọ azụ e gbakee. The Doppler results na-egosipụta na okwu nke faịlụ na ụdị na foto nwere ike hụrụ. Họrọ kpọmkwem faịlụ na ị chọrọ-eweghachi wee pịa on Weghachi mkparịta ụka igbe.
Niile faịlụ ndị ahọrọ ga-emesị weghachiri eweghachi mgbe a ole na ole nkeji. The natara faịlụ ekwesịghị-azọpụta na aga na ebe ebe faịlụ ọnwụ mere.
Akwado kaadị na ụdị na-ụdị faịlụ site Wondershare
Wondershare Data Recovery Akwado iche iche faịlụ formats. Otú ọ dị, ole na ole faịlụ ụdị ọ na-akwado na-agụnye:
Ozi na email
Ụfọdụ n'ime kaadị ụdị-akwado site na Wondershare agụnye
a. Zip disk
b. Multimedia kaadị (MMC)
c. Kọmpat Flash kaadị (CF)
d. Secure Digital kaadị (SD)
The ala akara bụ na e nwere ọtụtụ online kaadị ebe nchekwa mgbake ngwaọrụ. Ngwaọrụ bara uru ebe ọ bụ na enyemaka naghachi mkpa faịlụ. Otú ọ dị, online ngwá ọrụ ịgba na usoro nke nche nke onwe data ruru hackers na ojiji ọrụ.
Kaadị mgbake VS Wondershare Data Recovery, ihe bụ ọkacha mmasị gị?
Olee otú naghachi faịlụ gị mpụga ike mbanye
Olee otú naghachi faịlụ site na a formatted Draịvụ?
Nke otu onye bụ ihe kasị mma na kaadị ebe nchekwa mgbake software
Ụzọ Idozi Data Loss kpatara Kaadị ebe nchekwa Error
Best SDXC kaadị mgbake Software
Best xd Kaadị Iweghachite Software
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Olee naghachi data si kaadị nchekwa na ebe nchekwa kaadị mgbake ngwaọrụ online